Uncedo kwiakhawunti yakho | Oxford isiXhosa Living Dictionaries
Ikhaya Uncedo kwiakhawunti yakho
Le nxalenye inikela uncedo kwimibuzo eqhelekileyo emalunga nokubhalisa, ukungena, nokufikelela iakhawunti yakho.
Ukubhalisa kwabakwa-Oxford Dictionaries
Ukuba ungumrhumi omtsha, kufuneka ubhalise kwabakwa-Oxford Dictionaries ukuze ufikelele kwiakhawunti yakho.
Awukuhlawuleli ukubhalisa – kuza kufuneka nje i-adresi ye-imeyile.
Igama lakho lokusebenzisa
Ungasebenzisa i-adresi yakho ye-imeyile njengegama lakho lomsebenzisi.
Igama lakho lomsebenzisi kufuneka likhetheke – ukuba sele kukho umsebenzisi osebenzisa eli gama, awunakukwazi ukulisebenzisa.
Wakuba uyiyilile iakhawunti yakho, igama lakho lomsebenzisi alinakutshintshwa.
Ukuba ungumrhumi omtsha, kuza kufuneka uyile iphaswedi. Ungayitshintsha iphaswedi yakho kwiphepha leakhawunti yakho.
Ukuze ukhusele izinto zakho ezikwi-Oxford Dictionaries kufikelelo olungagunyaziswanga, sicebisa ukuba usebenzise iphaswedi enamandla.
Iphaswedi enamandla iba neekharektha okungenani ezi-7 ubude, kunye nomxube wonobumba abakhulu- nabancinci, iisimboli, namanani, yaye ayibinagama lakho okanye amagama apheleleyo esichazi-magama.
Sicebisa ukuba usebenzise iphaswedi eyahlukileyo kwiakhawunti yakho ye-Oxford kunaleyo uyisebenzisa kwezinye iiakhawunti zakho ze-intanethi (umzekelo eyokuthenga kwi-intanethi, eyokubhanka, okanye eye-PayPal).
Ukuba uyilibele iphaswedi yakho, ungakwazi ukuyiseta kwakhona apha.
Uncedo ekulogeni ungene
Cofa u-‘login’ kwiphepha lokuqala phezulu okanye uloge ungene apha ngokutayipha igama lakho lomsebenzisi nephaswedi. Ukuba awukabhalisi kwisayithi, uza kubona ilinki apho unokukwenza oko.
Ndiyilibele iphaswedi yam / iphaswedi yam ayisebenzi
Iphaswedi yakho inonobumba abancinci, ngoko hlola ukuba i-CAPS LOCK ayilayitwanga na. Ukuba uyilibele iphaswedi yakho, ungakwazi ukuyiseta kwakhona apha. Xa ucofa le linkii, kufuneka ufake i-adresi ye-imeyile yeakhawunti yakho, yaye ilinki yokuseta kwakhona iphaswedi uza kuyithunyelelwa nge-imeyile. Ukuba awuyifumani i-imeyile kwimizuzu embalwa, khangela kwiifolda zemeyile engenaxabiso okanye eyinkunkuma.
Uncedo olungakumbi lokuloga ungene
Ukuba awukakwazi ukuloga ungene, nceda usiqhagamshele.